Isha Dhallinyarada: NAD + & NMN oo ah Kaabis
/blog/Gallery/“Isha Isha Dhalinyarada”: NAD + & NMN oo ah Kaabis
Posted on 03 / 03 / 2021 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Soo saarista natiijooyinka cilmiyaysan ee ku saabsan sida taakulaynta NMN ay u garaacayso NAD meydadka jiirka ayaa ku dhacday wargeysyada iyo cinwaanada majaladda, iyagoo ugu yeeray daahfurkailo dhalinyaro ah. "
Daraasadu waxay soo warisay in jiirkii hore ay noqdeen dhalinyaro, firfircoon, iyo khafiifsan markii la siiyay xarunta. Sidaa darteed, waad beddeli kartaa habka gabowgaaga adoo qaadanaya kaabis. In kastoo ay tahay inaad kala hadasho qaadashada wixii dheeri ah dhakhtarkaaga.
Hisheerka NMN iyo NAD +
Nicotinamide adenine dinucleotide, ama NAD marka la soo gaabiyo, waa mid ka mid ah moleculeyaasha ugu muhiimsan uguna badan ee jirka ku jira. Sababtoo ah waxay udub dhexaad u tahay bixinta unugyada tamarta, ma jiraan geedi socod bayooloji ah oo aan u baahnayn NAD. Taas awgeed, NAD waa diiradda cilmi-baarista bayoolojiga ee baahsan.
Sannadkii 1906, Arthur Harden iyo William John Young waxay heleen "qodob" dareeraha laga soosaaray khamiirka khamriga ayaa xoojiyay halista sonkorta ee khamriga. "Qodobka", oo loo yaqaan "kaydinta" waqtigaas, wuxuu isu beddelay NAD.
Harden, oo ay weheliyaan Hans von Euler-Chelpin, ayaa sii waday inuu kala saaro qarsoodiga halsano. Waxaa la siiyay abaalmarinta Nobel Prize sanadkii 1929 si ay u horumariyaan faham faahfaahsan oo ku saabsan nidaamyadan, oo ay ku jiraan qaabka kiimikada iyo astaamaha waxa dhowaan loo yaqaan 'NAD'.
Sheekada NAD waxay ballaarisay 1930-yadii, iyada oo uu hagayo Otto Warburg, oo ah abaalmarin kale oo Nobel ah, oo daah-furtay doorka dhexe ee NAD ee fududeynta fal-gallo badan oo bayoolaji ah. Warburg waxay ogaatay in NAD ay u adeegto nooc ka mid ah gudbinta noolaha ee elektaroonigga. Kala wareejinta elektaroonikada mid ka mid molecule ilaa mid kale, waxay u adeegtaa aasaas u ah tamarta loo baahan yahay si loo sameeyo dhammaan fal-celinta noolaha.
Sannadkii 1937, Conrad Elvehjem iyo asxaabtiisii ​​Jaamacadda Wisconsin, Madison, waxay ogaadeen in kaabista NAD + ay daweeyeen eeyaha pellagra, ama "Afka Madow". Bini-aadamka, cudurka pellagra wuxuu sababa astaamo fara badan, oo ay ka mid yihiin shuban, waallida, iyo nabarro ku dhaca afka. Waxay ka timaaddaa yaraanta niacin waxaana hadda si joogto ah loogu daaweeyaa nikotinamide, oo ah mid ka mid ah horudhacayaasha NMN.
Daraasada Arthur Kornberg ee ku saabsan NAD + 40-kii iyo 50-keedii 'waxay ahayd aalad u horseeday inuu ogaado mabaadi'da ka dambeysa soo-saarista DNA-da iyo qorista RNA, oo ah laba hanaan oo muhiim u ah nolosha. Sannadkii 1958, Jack Preiss iyo Philip Handler waxay soo bandhigeen saddexda tallaabo ee bayoolajiyeed, ee ay nikotiinku u beddelaan NAD. Tallaabooyinkan taxanaha ah, oo loo yaqaan dariiqa, ayaa maanta loo yaqaanaa Waddada loo maro Preiss-Handler.
1963, Chambon, Weill, iyo Mandel waxay soo wariyeen in nicotinamide mononucleotide (NMN) ay bixiyeen tamartii loo baahnaa si loo kiciyo enzyme nukliyeer muhiim ah. Daahfurkaani wuxuu wadada u xaaray taxane taxane ah oo daahfurnaan layaableh ah oo ku saabsan nooc borotiin ah oo loo yaqaan PARP. PARPs waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hagaajinta dhaawaca DNA, nidaaminta dhimashada unugyada, iyo waxqabadkoodu la xiriiro isbeddelada nolosha.
Sannadkii 1976, Rechsteiner iyo asxaabtiisuba waxay heleen caddayn lagu qanci karo NAD + waxay umuuqatay inay leeyihiin “hawl kale oo muhiim ah” unugyada mammalian-ka, kana baxsan kaalinteedii caadiga ahayd ee bayoolaji ahaan sidii meydka tamar wareejinta.
Raadintaani waxay u suurta gelisay Leonard Guarente iyo asxaabtiisa inay ogaadaan in borotiinnada loo yaqaan sirtuins ay u isticmaalaan NAD inay ku dheereeyaan cimrigooda iyagoo si kala duwanaan ku dheehan tahay u ilaalinaya hiddo-wadayaasha qaarkood “aamusnaan”. Tan iyo markaas, xiisaha ayaa ku koray NAD iyo dhexdhexaadiyeyaasheeda, NMN iyo NR, awooddooda si loo wanaajiyo tiro ka mid ah arrimaha caafimaadka la xiriira da'da.
Wkoofiyadaha Cuntooyinka waxay ka kooban yihiin NMN?
NMN waxay ku dhacdaa si dabiici ah cuntada sida avokado, broccoli, kaabajka, iyo yaanyada. Hadda, waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso: “Haddii NMN laga helo cuntada, miyaanan kordhin karin heerarkayga NAD + anigoo cunaya in badan oo ka mid ah cuntooyinkaas? “Taasi waa su’aal fiican waxaanan kugu dhiiri galinaynaa inaad cuntid cunto caafimaad leh. Laakiin, waa tan arrinta:
In kasta oo NMN ay ku dhacdo cuntooyinkan, haddana isku-uruurintu waxay ka yar yihiin 1 mg halkii kiilo oo cunto ah. Si kale haddii loo dhigo, si aad u hesho qiyaastii 1mg ee NMN, waa inaad wax ka cuntaa qiyaastii 1kg oo broccoli ah!
Waxaa la ogaaday in si kor loogu qaado heerarka NAD + ee aadanaha, heerarka NMN waa inay ahaadaan boqolaal milligram halkii qiyaas. Tani way ka sarreeysaa waxa aan ka heli karno cuntooyinkayaga, iyadoon loo eegin inta broccoli aan cunno.
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee NAD + & NMN oo ah Kaabis.
Maxaa loogu Kordhinayaa NMN?
Sidaan soo aragnay, NMN ayaa door muhiim ah ka ciyaaray abuurista NAD +. Markaynu heerar sare oo NAD + ah ku leenahay jirkeena, tamarta gacantu waxay sii kordheysaa taasoo noqota shidaalka nolosha — awood siinta xubin kasta iyo unug kasta oo ka mid ah jidhkeena kana ilaalinaya waxyeelada DNA. NAD + wuxuu kaloo hawlgaliyaa Sirtuins kuwaas oo lagama maarmaan u ah kordhinta rajada nolosheena iyo inaan gaabinno howlaha gabowga.
Ku-kabashada NMN waxay si toos ah u kordhineysaa heerarka NAD + ee jirkeena, taas oo ka hortageysa hoos u dhaca dabiiciga ah ee dhaca markaan da 'nahay. Cilmi baaris ayaa muujisay iyadoo lagu kaabayo NMN, Heerarka NAD + dadka waayeelka ah waxaa loo korin karaa kan 20 jirka ah!
(1) Waa maxay Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) iyo Shaqooyinkeeda?
NAD + waa coenzyme muhiim u ah nolosha iyo shaqooyinka gacanta. Enzymes-ka ayaa ah kuwa kiciya oo ka dhigaya suurogal falgallada kiimikada. Coenzymes waa "caawiyayaal" molecules ay enzymes u baahan yihiin si ay u shaqeeyaan.
NAD + waa molecule ugu badan jirka marka laga reebo biyaha, la'aantoodna noole ayaa dhiman lahaa. NAD + waxaa isticmaala borotiinno badan oo jirka oo dhan ah, sida sirtuins-ka, oo dayactira DNA-da dhaawacan. Waxay sidoo kale muhiim u tahay mitochondria, kuwaas oo ah awooda unugyada waxayna dhaliyaan tamarta kiimikada ee jirkeenu isticmaalo.
(2) Hababka loo Kordhiyo heerarka NAD +
Soonka ama yareynta qaadashada kalooriga, oo sida fiican loogu yaqaan xaddidaadda kalooriga, ayaa la muujiyey inay kordhinayso heerarka NAD + iyo waxqabadka sirtuin. Jiirka, dhaqdhaqaaqa NAD + iyo sirtuin ee ka kordhay xaddidaadda kalooriga ayaa la muujiyey inuu yareynayo geedi socodka gabowga. In kasta oo NAD + ay ku jiraan cuntooyinka qaarkood, xoogsashada ayaa aad u hooseysa oo saameyn ku yeelanaysa uruurinta unugyada 'intracellular'. Qaadashada waxyaabo dheeri ah, sida NMN, ayaa la muujiyey inay kordhinayso heerarka NAD +.
(3) nad+ Ku kabo sida NMN
Isku-uruurinta unugyada 'NAD +' ayaa ka yaraanaya gabowga maadaama shaqooyinka caadiga ah ee gacanta ay hoos u dhigayaan sahayda 'NAD + waqti ka dib. Heerarka caafimaadka leh ee NAD + waxaa loo maleynayaa in lagu soo celinayo kaabayaasha NAD +. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, horudhacayaasha sida NMN iyo nikotiinamide riboside (NR) waxaa loo arkaa inay yihiin kaabis wax soo saar NAD +, kordhinta uruurinta NAD +. David Sinclair, oo ah cilmi-baare ka socda NAD + kana soo jeeda Harvard, wuxuu leeyahay, “Quudinta ama maamulista NAD + si toos ah noolaha ma aha xulasho wax ku ool ah. MADOOLKA 'molecule' NAD + si sahal ah ugama gudbi karo xuubka unugyada si uu u galo unugyada, sidaa darteedna lama heli karo inuu si togan u saameeyo dheef-shiid kiimikaadka. Taabadalkeed, molikuyulo horudhac ah oo loo yaqaan 'NAD +' waa in loo adeegsadaa in lagu kordhiyo heerarka la heli karo ee NAD +. Tan macnaheedu waa NAD + looma isticmaali karo si toos ah dhamaystirid, maxaa yeelay si fudud looma nuugo. NAD + horudhacyadu way ka fudud yihiin NAD + waana kaabisyo wax ku ool ah.
Nikotinamide Mononucleotide (CAS:1094-61-7), oo sidoo kale loo yaqaan NMN, oo ah iskudhaf dabiici ah oo ku dhaca qaddar yar jidhka bini'aadamka iyo sidoo kale cuntooyinka qaarkood. NMN hadal ahaan waa la heli karaa, marka afka laga qaato waxay taageeri kartaa heerarka NAD + ee ku jira beerka iyo unugyada muruqyada.
※ Sidee NMN loogu Dhexgeliyaa Jirka?
NMN waxaa laga soo saaraa fiitamiinada B ee jirka ku jira. Enzyme-ka mas'uulka ka ah sameynta NMN ee jirka waxaa lagu magacaabaa nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT). NAMPT waxay ku dhejisaa nikotinamide (fiitamiin B3) fosfooza sonkor ah oo loo yaqaan PRPP (5'-phosphoribosyl-1-pyrophosphate). NMN sidoo kale waxaa laga samayn karaa 'nicotinamide riboside' (NR) iyada oo lagu darayo koox fosfateeti ah.
'NAMPT' waa enzyme-xaddidan oo xadidaya soosaarka NAD +. Tani macnaheedu waa heerarka hoose ee NAMPT ayaa sababay hoos u dhaca wax soo saarka NMN, taasoo keentay hoos u dhaca heerarka NAD +. Ku darista maaddooyinka horudhaca ah sida NMN ayaa sidoo kale dardargelin kara wax soo saarka NAD +.
Faa'iidooyinka suurtagalka ah ee NMN
Markaad ku dhexjirto unugyada xayawaanka, NMN waxay quudisaa soo saarista NAD +, oo siisa unugyada tamarta loo baahan yahay waxaana loo maleynayaa inay muhiim u tahay gabowga caafimaadka qaba. NAD + wuxuu kaloo door muhiim ah ka ciyaaraa dhaqaajinta borotiinka ilaaliya sharafta DNA-dayada. Marka la eego doorka udub dhexaad u ah geedi socodka gacanta ee faraha badan, faa'iidooyinka laga heli karo NMN waxay ku sii fidayaan ku dhowaad dhammaan nidaamyada jirka. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah tusaalooyinka si fiican loo yaqaan.
❶ Waxay dhiirrigelisaa caafimaadka xididdada dhiigga iyo socodka dhiigga
Waxaan ku tiirsan nahay muruqyadeena lafa-beelka dhaqdhaqaaqa, xasilloonida iyo xoogga. Si aad u sii ahaato mid xoog leh oo xaalad wanaagsan ku jira, muruqyadani waa inay cunaan qaddarro muhiim ah oo ah mecolojiinyada muhiimka ah, sida gulukooska iyo asiidh dufanka leh. Sababtoo ah NAD + ayaa looga baahan yahay inay dheef-shiid kiimikaadyadan, muruqyadeennu waxay u baahan yihiin sahay joogto ah oo dhismaheeda, sida NMN.
Daraasadaha jiirka ayaa muujiyey in NMN ay ka ilaalineyso hoos u dhac badan oo la xiriira gabowga caafimaadka, sida adkeynta marinnada dhiigga, diiqadda oksidheerka, awoodda unugyadayada si aan u sii wadno qaybinta, iyo xitaa isbeddelada sida hidde-sideyagu u firfircoon yahay, waxa ay saynisyahannadu ugu yeeraan hiddo-wadaha muujinta.
❷ Waxay wanaajisaa adkeysiga murqaha iyo xoogga
Daraasaduhu waxay muujiyeen in jiirku quudiyay NMN muddo dheer uu lahaa tamar dheef-shiid kiimikaad oo aan lahayn waxyeellooyin muuqda. Caafimaadka muruqyadeenu marba marka ka sii muhiimsan ayey sii kordhayaan markaan sii gaboobeyno iyo hoos udhaca ku yimaada NAD +.
❸ Wuxuu Kahortagaa Cudurka Wadnaha
Ugu yaraan muruqyadaada lafaha waxay helayaan nasasho. Keliya qalbigaagu ma nasan karo, xitaa kama yarayn karo xawaarahiisa isagoon dhibaato weyn keenin. Baahida wadnaha ee tamarta, sidaas darteed, waa mid aad u weyn. Iyo si ay u sii wado shiicada, waxay u baahan tahay inay sameyso dhammaan NAD + ay awooddo. Tani waa sababta unugyada wadnuhu ugu baahan yihiin sahay joogto ah NMN.
❹ Waxay Yareysaa Khatarta Cayilka
Cayilka xad dhaafka ah wuxuu kuxiranyahay xaalado caafimaad daro oo farabadan wuxuuna noqon karaa mid aad u dhib badan in la daweeyo. Ma jirto dawo fudud oo buurnida iyo xaaladaha la xiriira sida sonkorowga iyo cilladda dheef-shiid kiimikaadka. In kasta oo qaabeynta qaab nololeedka sida jimicsiga joogtada ah iyo cuntada caafimaadka leh ay muhiimad weyn leeyihiin, in yar oo kasta ayaa caawisa.
Daraasadaha jiirka, NMN waxay muujineysaa saameyn la mid ah dhinacyada xaddidaadda kalooriga (CR). In kasta oo CR la muujiyey inay siiso waxtarro badan xagga gabowga iyo caafimaadka, haddana waa xukun adag in la ilaaliyo muddo dheer. Yaraynta waxtarkeeda iyada oo aan loo hoggaansameynin cunnooyinka noocan oo kale ah waxay noqon doontaa mid aan la dafiri karin.
❺ Waxay wanaajisaa Dayactirka Dayactirka DNA
NAD + laga sameeyay NMN waxay dhaqaajineysaa koox borotiin ah oo loo yaqaan 'sirtuins'. Sirtuins, oo mararka qaar loo maleeyo inay yihiin ilaaliyayaasha caafimaadkeena, waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta sharafnimada DNA. Waqti kasta oo unugyadeenna ay kala qeybsamaan, DNA-da dhamaadka dariiqyada koromosoomkeennu way sii yaraataa wax yar. Waqti cayiman, tani waxay bilaabaysaa inay dhaawacdo hidde sideena. Sirtuins waxay gaabis ku tahay hawshan adoo xasilinaya waxyaabahaas dhamaadka ah, oo cilmi ahaan loogu yaqaan telomeres. Si loo shaqeeyo, si kastaba ha noqotee, sirtuins waxay ku tiirsan yihiin NAD +. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujiyeen in quudinta jiirka NMN ay shaqeysay sirtuins waxayna horseedday telomeres xasiloon.
❻ Kordhinta Shaqada Mitochondrial
Si fudud haddii loo dhigo, ma noolaan karno la'aanteena mitokondria. Qaab-dhismeedyada gacanta ee gaarka ah waxaa loo yaqaannaa awoodda unugyada. Waxay u beddelaan maaddooyinka jirka cuntada aan cunno oo ay u beddelaan tamarta unugyadeennu isticmaalaan. NAD + ayaa udub dhexaad u ah hawshan. Xaqiiqdii, cilladaha mitochondrial ee keena luminta NAD + waxay xitaa saameyn ku yeelan karaan xanuunnada neerfaha sida Alzheimers. Daraasado lagu sameeyay jiirarka ayaa muujiyey in kaabista NMN ay badbaadisay xoogaa cilladaha mitochondrial.
How LOng Does It TAke To See Ecilladaha Of NMN?
AASrawBudada NMN waxay kordhisaa heerka NMN ee jirkaaga daqiiqado gudahood, halka heerarka NAD + lagu kordhiyay 60 daqiiqo gudahood. Si kastaba ha noqotee, NAD + inuu bilaabo inuu dib u cusbooneysiiyo unugyadaada, guud ahaan wuxuu qaadanayaa dhowr toddobaad.
Isticmaalayaasha badankood waxay soo sheegaan inay dareemayaan da 'yar iyo caafimaad 2 ilaa 3 toddobaad gudahood. Faa'iidooyinka buuxa ee NMN waxaa la dareemi karaa dhowr bilood ka dib isticmaalkeeda - laakiin waxaad durbaba dareemaysaa farqiga dhawr toddobaad gudahood!
Markaa haddii aad rabto inaad la kulanto saameynta isbeddelka ee AASraw's NMN, hadda waxaad haysataa fursad qaas ah oo aad sidaas ku sameyso. Iyo qaybta ugu fiican? Uma baahnid inaad qaadatid wax khatar ah. AASraw's NMN waxaa daboolaya dammaanad qaad qancisa. Tani waxay ka dhigan tahay sababta oo ah inay aad u hubaan inaad jeclaan doonto NMN-kooda, waxay diyaar u yihiin inay ku siiyaan dammaanad.
Saameynada Dhinac ee Kaabashada NMN
Iyada oo wax kasta oo cusub dhamaystirid, waxaa jira walaac ku saabsan dhibaatooyinka soo raaca. Illaa iyo hadda, daraasadaha sayniska ma aysan soo bandhigin wax saameyn ah oo cabsi leh ama waxyeello leh oo la xidhiidha isticmaalka dheeri ah.
Cabashada kaliya ee xoogan ee ku saabsan nicotinamide mononucleotide waa iswaafaqsanaanta waxtarka, laakiin taasi waxay ku dhacdaa heerarka soo koraya ee kaabis cusub. Dabcan, waa inaad kala tashataa dhakhtarkaaga wixii ku saabsan qaadashada kaabadan, gaar ahaan haddii aad uur leedahay ama aad naas nuujiso.
Sanado badan, waxaa loo maleynayay in moleculeyaasha NAD + ay aad u balaaran yihiin oo si toos ah loo qaadan karo loona baahan yahay in kor loo qaado iyadoo la adeegsanayo hordhac sida NMN. Dhawaan, waxaa la ogaaday in NAD + uu ka gudbi karo caqabadda maskaxda-dhiigga iyo inuu gaaro 'hypothalamus' haddii si hoose loo qaato. Waxay kor u qaadi kartaa heerarka NAD + ee qanjirkaan kaas oo ka faa'iideysan doona jirka oo dhan maxaa yeelay waxay xakameysaa dheef-shiid kiimikaadka. Waxay sidoo kale noqon kartaa karti dhamaystirid si loo caawiyo kuwa qaba dhibaatooyinka dheef-shiid kiimikaadka sababtoo ah hoos u dhaca heerarka NAD + ee hypothalamus.
NMN, dhanka kale, waxay sare u qaadeysaa heerarka NAD + ee unugyada jirka oo dhan waana kaabis fiican oo la qaado si kor loogu qaado guud ahaan heerarkaaga NAD + iyo gabowga gaabiska ah.
Nicotinamide mononucleotide (NMN) waa cunsur dabiici ah oo jirkaaga ka mid ah kaasoo kiciya soo saarista qayb kale oo loo yaqaan 'nicotinamide adenine dinucleotide'. NMN iyo NAD labaduba door muhiim ah ayey ka ciyaaraan ka hortagga geedi socodka gabowga. Inta badan NAD, tan iyo markii aad sii weynaato, awoodda yar ee jirkaagu waa inuu soo saaro NAD. Taasi waa meesha ay ku darsan karto NMN inay caawiso tan iyo, markii ay cuneen jiir, waxay kicineysaa NAD ee mindhicirada hoose isla markiiba.
Natiijo ahaan, kaabista waxaa loo sameeyay "isha dhallin-yarada", iyo habka gabowga jirku wuu gaabiyo oo wuu is-beddelaa. Kaliya maahan daraasadaha inay cadeeyeen ansaxnimada geedi socodka kahortagga gabowga, laakiin kaabista NMN ayaa sidoo kale laga yaabaa inay gacan ka geysato kahortagga ama daaweynta cudurrada kale sida kansarka, wadnaha iyo sonkorowga. Sannadkii 2016, koox saynisyahanno ah ayaa bilaabay daraasaddii ugu horreysay ee bukaan-socod eegtada ee bina-aadamka saamaynta togan ee qaadashada nafaqada NMN. In kasta oo wax-ku-oolnimada NMN ay wali ku jirto heerarka hore, haddana warbixino badan iyo ka badan ayaa ansaxinaya waxtarka dheeri ah.
Markaad go'aansato inaad ka iibsato dheellitirka NMN khadka tooska ah, fadlan ka akhriso qoraalo dheeri ah oo ku saabsan NMN iyo NAD +. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato inay u fiicantahay jirkaaga, sidee jirkaaga uga shaqeeyaa, markaad qaadatid iyo qiyaasta NMN, wixii qatar ah ee kugu imaan kara. Weclome si aad noola socoto wixii cusbooneysiin dheeraad ah ee ku saabsan NMN mustaqbalka.
 Lautrup S, Sinclair D iyo al. 2019. NAD + ee Maskaxda Maskaxda iyo Xanuunada Neurodegenerative. Dheef-shiid kiimikaad 30,630-655.
 Zhang, H., 2016. NAD + buuxinta waxay hagaajineysaa mitochondrial iyo shaqada unugyada unugyada waxayna kordhisaa cimriga jiirka. Sayniska 352, 1436-1443.
 "NMN vs NR: Farqiga udhaxeeya Kuwani 2 NAD + Precursors". www.nmn.com. Raadin 2021-01-11.
 Imai, S., & Guarente, L. 2014. NAD iyo sirtuins gabow iyo cudur. Isbeddellada ku dhaca Biology, 24 (8), 464-471.
 Braidy, CK Lim, R.Grant, BJ Brew, iyo GJ Guillemin. 2013. Serum Nicotinamide Adenine Dinucleotide Heerarka Iyadoo loo marayo Koorsada Cudurka ee Multiple Sclerosis. Maskaxda 1537: 267-272.
 Stipp D (Maarso 11, 2015). "Beyond Resveratrol: The Anti-Gabowga NAD Fad". Shabakad Blog Blog American ah.
 Prolla, T., Denu, J. 2014. Yaraanta NAD ee cillad la'aanta da'da 'Mitochondrial Disfunction'. Dheef-shiid kiimikaad, 19 (2), 178-180.
 Fletcher RS, Lavery GG (Oktoobar 2018). "Soo bixitaanka kinotinamide riboside kinases ee nidaaminta NAD + dheef-shiid kiimikaadka". Wargeyska Endocrinology Molecular. 61 (3): R107 – R121. doi: 10.1530 / JME-18-0085. PMC 6145238. PMID 30307159.
Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaatid waxyaabaha ku saabsan Pregabalin	30 daqiiqo si loo ogaado Nootropic Pramiracetam-AASraw